Isayensi Yezokuphila Ebonakala Ngombono We-Ayurvedic
Ngokusho kwe-Ayurveda, umuntu ukhula ngaphansi kwethonya lamalungu alawula umhlaba wonke: lokhu umhlaba, amanzi, umlilo, umoya kanye ne-element element yesihlanu-ether, efanekisela isikhala. Kodwa amandla alezi zakhi ahlangene ngamunye wethu ngezilinganiso ezahlukene - anquma ngesikhathi esifanayo nomthethosisekelo wethu womzimba kanye nomqondo nomoya, ndawonye ngokubizwa ngokuthi "dosha".
Ukuqamba umoya ne-ether? Uhlobo lomthethosisekelo lomuntu onjalo yiboya bekotini, ufana nomoya, kunokukhanya futhi okuncane, okuphilayo, okungazinzile (ngokudla, ukulala, izisusa, njll). Lowo onobungozi bamakhemikhali (umlilo namanzi), ubonisa intshiseko, ukuthambekela kokuthukuthela, okwenziwe ukwandisa ukujuluka nokukhwabanisa isikhumba. I-Kapha (umhlaba namanzi) ibonakala ngesibalo esinamandla, ukuvimbela, ngisho nokuphuza.
Impela, i-Dosha ayinqunyiwe kanye naso sonke: umuntu angaba yi-vata-pitta, vata-kapha. Lezi zinhlanganisela zilokhu zishintsha ngaphansi kwesithonya sezulu, ukudla okunomsoco, imizwelo, iminyaka ... Imvula yase-autumn yandisa ithonya le-kapha. Umlilo nomhawu kwenza i-pitta ikhule. Lezi ziphazamiso zithatha umzimba. Ukuze usondelane nesosha sakho sokuqala, udinga ukuvumelanisa nokudla kwakho, indlela yokuphila nemicabango. Kulokhu, kanye ngonyaka, ungathatha isifundo sezinyanga ezimbili zokuphatha ukwelashwa esikhungweni se-Ayurvedic noma izifundo ezimbalwa. Ukwazi umosha wakho, ungasebenzisa kangcono amathuba okuzindla kanye ne-yoga ukuze ulondoloze ukulinganisela empilweni yakho yansuku zonke. Imininingwane funda esihlokweni esihlokweni esithi "Isayensi yokuphila isendaweni ye-Ayurveda."
Isici sokubukeka, esithandwa kakhulu kumuntu wanamuhla, sigxile enjabulweni, injabulo yenyama, inendawo encane ku-ayurveda. Ochwepheshe emitholampilo yomzimba (noma, njengoba kuthiwa lapha, abahlinzeki), ukwenza ukusikhipha umzimba, ukuhlunga nokugqoka, babheka njengabahlengikazi kunokwakheka kwemitholampilo yobuhle. Ziphatha kahle iziguli zazo, kodwa ngaphandle komkhosi, azikhathaleli ngenduduzo noma injabulo, kodwa kuphela ngempilo. Inhloso ye-ayurveda inhlalakahle kanye nokuphila okude. Lokhu kuyindlela ephelele, eyenzelwe ukusiza umuntu ukuba ajabule. Ubuhle bufakiwe kulo mqondo wenjabulo ngandlela-thile, ngoba i-Ayurveda iyasiza, kufaka phakathi ukulahla iziphambeko ezithile zezimonyo, isibonelo, izinkinga zesikhumba, okwenza amachashazi namagwinya angabonakali, futhi ngcono isimo sezinwele nezinzipho. Emaphuzu amaningi, i-Ayurveda ihluke ngokuphelele nemibono yanamuhla yokuvumelanisa - isibonelo, nomqondo, kuzo zonke izindleko, ulahlekelwe isisindo, uzuze ukuvumelana. Esikhathini samasiko amahle namuhla kubhekwa njengomuntu omncane - yena, njengomthetho, akanakho kapha. Kusukela ekubukeni kwe-Ayurveda, lokhu kuhlanganisa izinkinga ngempilo, ikakhulukazi uma uKapha engumbusi wakhe obhekene nomthethosisekelo, okungukuthi, uma enesimo somzimba obukhulu. Ngokusho kwe-Ayurveda, indlela ephilile kunazo zonke ukulandela isimo somuntu, ukufeza isimo esiphezulu somzimba, ukuthuthukiswa okungcono kwamakhono ayo, okushoyo, uNkulunkulu wale fomu. Lapho umuntu ethula nomzimba wakhe, imicabango yakhe nemizwelo yakheka ukumbusa. Lena yindlela yokuvumelanisa, okungukuthi, kuleso simo somzimba nomphefumulo, lapho umuntu engakwazi ukucabanga ngezinkinga zakhe, kodwa cabanga ngekusasa lakhe, ngalokho angakuletha kuleli zwe.
Hlanza umzimba kanye nemicabango
Kusukela ekubukeni kwe-ayurveda, idolobha elikhulu lidlula wonke umuntu onobuthi - lo mbono ukhuthaza ezinye izakhamizi zayo ukuthi zihambe njalo ekuhlanjululeni i-Ayurvedic. Ngaphezu kwakho konke ukungcola kwemvelo okuqondakalayo, kunezimoxongo ezingokomzwelo - ukucindezeleka nokucasuka, kanye nemicabango ekhungathekile yengqondo kanye nokwehluleka kokwaziswa okusizungezile (ngokuvamile impahla ephansi). Ukuhlanzwa kungumuthi we-alpha ne-omega we-Ayurvedic. Ukudla okubiwe kabi, ukuphuza ngokweqile kakhulu, ukushisa komzimba okuphakeme kakhulu noma okuphansi kakhulu - noma yikuphi okweqile okusemandleni okusilimaza kakhulu, okwenza amandla okuphila ajikeleze ngokukhululekile. "Udoti" lomzimba luyizicucu, umchamo kanye nokuthuthumela. Ukuze ususe kalula lezi zinto ezimbi, ungahlanganyela kulohlobo oluthile lomsebenzi (ngokwesibonelo, ukuhamba, ukubhukuda), usebenzise ukuphefumula kwesisu, wenze amafutha okubamba ubuso noma ama-massage anezakhi zamakhambi azisiza ukuhlanza. Umzimba wethu ubonisa izinsalela zokuphila ngokusebenzisa izimbobo ezihlukahlukene, kuhlanganise nomlomo, izindlebe namaso. Ukuthunga, ukugaya, ukukhala - akukho lutho oludingeka luvinjelwe! Ngendlela efanayo, umuntu angasusa imicabango ephazamisayo, ishintshe isiteshi, lapho into engalungile iboniswa kuthelevishini, futhi iqhube imithombo yomsindo. Ukuphumula okunjalo kungasiza namasu okuphumula.
Ngaphezu kwenkimbinkimbi yokuhlanza umzimba, okuthiwa "i-poppcha-karma," i-yoga nokuzindla kufakwe ekuhambeni okugcwele kokuxoshwa komzimba. Ngokuyinhloko, i-ayurveda ayifuni ukwahlukana komuntu ezingxenyeni zomzimba nezingokwengqondo: isibonelo, kukholelwa ukuthi ukusikhipha ngamafutha ka-sesame kuthinta umzimba ngendlela efanayo nomphefumulo. I-Yoga ifundisa ukuba nomzimba womuntu siqu futhi isiza ukuhlanza isimo sokwemvelo, kuyilapho ukuzindla kuhlanza emithonjeni yengqondo. Umzimba wethu nomoya, njengeponji, bayakwazi ukuzibandakanya kuzo kanye nabo bonke abalungile - futhi ezintshisekelo zethu ukuzinakekela. I-Ayurveda incoma ukunakekelwa izinga lokudla kwethu (uma kunokwenzeka okubandakanya izithelo ze-bio, ngokusekelwe izithelo ezintsha nezomisiwe, kuhluma okusanhlamvu kanye nemikhiqizo yobisi), zinike isikhathi sokulala ngokugcwele kanye nokucabangela nje - isibonelo, ujabulele ukubona ilanga lokushisa ...
U-Ayurveda uphakamisa nokuthi "Umlilo Womlilo". Leli gama, elibizwa nge-"agni," lifanekisela amandla ethu futhi lisivumela ukuba sinqume ngokuqiniseka ukuthi yini okufanele siyiguqule noma sinqabe. Nguye osekela ukuphila kithi. Uma ilangabi lakhe liyancipha, ukugula kuqala. Imithi ye-Ayurvedic ihlukanisa izinhlobo eziyishumi nesishiyagalolunye zomlilo we-agni, osemzimbeni. Oyinhloko, obhekene nokugaya, uvuselela imetabolism futhi ikuvumela ukuba "ugaye" imizwelo emibi. Ngezinye izikhathi kwanele ukuyivuselela ukuze iphinde ithole amandla. Ungayishayela kanjani? Kwanele ukufunda imikhuba embalwa: ungadli ebusuku; ulale amaminithi angama-20 ngakwesobunxele ngemva kokudla; ukuphuza esiswini esingenalutho ingilazi yamanzi esetshenziswe ngethusi (ngoba lamanzi agcinwa ngobusuku obuncane emkhunjini wethusi); faka emibuthanweni yemenyu yakho ye-ginger fresh, okhethiwe nge-lime kanye nosawoti olwandle. Futhi ngezikhathi ezithile uzihlanganise nge-massage yomzimba wonke noma ngisho nezinyawo zakho nje.
Umzwelo wokungabi nalutho uhlukile ezweni lethu eliphuthumayo. Ngakho-ke, kubalulekile ngathi ukuba sinakekele imizwelo yethu. Ngokombono we-Ayurvedic, amandla awo akwazi ukusheshisa ukuphola futhi afake isandla ekufezeni izinhlelo zethu. Ukuvusa amandla okujabula alolu hlobo kungenzeka ngosizo lobuciko (isibonelo, uhlobo oluthile lomsebenzi wokudala, ukuya emnyuziyamu ...). Futhi ngokuxhumana okuqondile nalezi zakhi ezinhlanu: ungasebenza ensimini, ugibele, ubuke ilangabi lekhandlela, uqoqe isifuba esiphezulu somoya - zonke lezi zenzo ziyasizuzisa, ziphinde zihlangane nezwe elizungezile futhi zivuselele amandla angaphakathi. I-Ayurveda ayifuni ukuzenza izincomo zendawo yonke - i-doshas yethu ayigxilile njalo emzuzwini wonke. Kodwa abahlakaniphile baseNdiya bathola isisombululo esihle: ukudla okunomsoco, ukulala okuzolile, ukunyakaza futhi kanjalo ukuzola kwengqondo nangokomzwelo. Umqondo ovamile ongavamile!
Emishini yamaShayina, kukhona umqondo wezinto ezibalulekile ze-chi. E-Indian kukhona okulinganayo - i-prana. Ngokusho kwe-Ayurveda, lokhu kuphefumula kokuphila kuhamba ngeziteshi ezingu-72 ezinkulungwane ezithinta umzimba wethu. Amandla agxila ezikhungweni eziyisikhombisa ezinkulu - izikhungo zamandla ezitholakala emgodleni. Kukholelwa ukuthi ukusabalalisa kwawo okukhululekile, okuhambisanayo kuqinisekisa impilo yethu futhi kusinikeza umqondo wenjabulo yokuphila. Singaqinisekisa kanjani ukugeleza okugcwele kwaleli gesi? Ngosizo lwamakilasi e-hatha yoga, ngosizo lwe-massage emuva noma izinqubo ezisebenzisa ama-ayurvedic, lapho uchwepheshe eqondisa khona ezindaweni ezithile zamandla. Ukubamba izinyawo, izintende kanye nendawo ezungeze amehlo nakho kuyasiza. Manje siyazi ukuthi isayensi yokuphila isebenza kanjani esikhundleni se-Ayurveda.
Ukulungiselela ukwelashwa kwezifo zesikhumba
Kungani laba labia bebumnyama?
Okubangela isifo sikashukela
Izakhiwo kanye nokusetshenziswa kwamafutha abalulekile we-jasmine
I-cholesterol, izindima zayo eziphilayo kanye namakhemikhali
Ukupheka okumnandi: ama-marshmallows e-banana ayenziwe
Ukukhathazeka esiswini emva kokudla: yini okufanele uyenze?
Indlela yokwenza massage ejabulisayo kumuntu noma owesifazane?
Ukufunda ukwenza umuthi ongajwayelekile
Amaskithole we-Chocolate ebusweni nasemzimbeni
Yiziphi amavithamini adingekayo owesifazane
"Ukunakekelwa kwe-Milky" esikhumbeni sakho
Iphunga pudding nge ukhilimu omuncu
Amasks ama-blondes ekhaya
Uma uthanda umuntu emsebenzini, yini okufanele uyenze